eazycorner – Page5– Traning, Sales and Services
ဘာကြောင့် cloud သည် ဖန်တီးတီထွင်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးသော Storage (သိုလှောင်ရုံ) တစ်ခု ဖြစ်လာတာလည်း
Jan 26, 2021 phage phage
ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူသော ဒီဂျစ်တယ် သိုလှောင်မှုကို ရှာဖွေခြင်းသည် ဖန်တီးမှုများအတွက် အရေးကြီးလှပါသည်။ Data များ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ ဒီဇိုင်းဖိုင်များ ပိုမိုများပြားလာသည် နှင့်အမျှ သင်၏ ဖိုင်များကို သိမ်းရန် အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့…
Nov 11, 2020 phage phage
unicode မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင် ရှိသင့်သည့် အနေအထားတစ်ခုထက် အဆီတွေတက် အဝဖက်ကိုရောက်လာခဲ့လျှင် သွားလာနှေးကွေး လေးမှိုင်းနေတက်လာပါတယ်အဲလိုမျိုးအချိန်ရောက်လာမှသာလျှင် အများအားဖြင့် ဝိတ်ချတော့မယ် အဆီချမယ်ဆိုသည့် စိတ်ကူး စိတ်သန်းပေါ်လာတက်ကြပါတယ် ။ ပေါ်ပေါက်မှု့နှင့်အတူ လွဲမှားသော အယူအဆကိုအခြေခံပြီး ဝိတ်ချခြင်းကို လုပ်ဆောင်တက်ကြပါတယ် ။…
News virus windows
Oct 20, 2020 phage phage
ခုလက်ရှိမှာ Ransomware thread ဟာ တော်တော်များများမှာ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Window 10 အသုံးပြုသူ user များနှင့် IT admin များအတွက် ကိုယ့်ရဲ့ PC ကို ဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်သလည်းဆိုတာကို အခု…
Sep 2, 2020 phage phage
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ The coronavirus ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက် ဘ၀နေထိုင်စားသောက်မှုအတွက် အလွန်ကို စိန်ခေါ်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်၊ တစ်နေရာမှ တစ်နေရာ၊ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် နည်းလမ်းတွေတီထွင် ကြံဆလာကြပါတယ်။ အခုကတော့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ မိသားးစု၊ သူငယ်ချင်း၊…
May 7, 2020 phage phage
1) Window စတက်တာနဲ့ နောက်ခံမှာ run နေသည့် program တွေကို ပိတ်ရန် တစ်ခါလေမှာ စက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အသုံးမပြုပဲ နောက်ခံမှာ ပွင့်ပြီး Run နေတဲ့ Program လေးတွေရှိတဲ့အတွက်လည်း Window တက်ရာတွင်ဖြစ်စေ၊…
News shortcut windows
Mar 4, 2020 phage phage
Ctrl + X Cut the selected item. Ctrl + C (or Ctrl + Insert) Copy the selected item. Ctrl +…
Microsoft Word Shortcut Keys and Functions
Feb 5, 2020 phage phage
S/N Short Cut Keys Function 1 Ctrl + A Select the all contents of the page2Ctrl + B…